सहकार्यले सफल डाक्टर दम्पती – Health Post Nepal
२०७५ साउन ११ गते ५:०४
पोखरा मणिपाल कलेजबाट भर्खरै एमबिबिएस पूरा गरेर डा. विनीता जोशी वीर अस्पतालमा जनरल मेडिकन विभागमा इन्टर्नसिप गर्दैै थिइन् । डा. रोविन जोशी सर्जरी विभागमा काम गर्थे । पढाइ सकेका छोराछोरीको उपयुक्त वरवधू खोजेर विवाह नगरिदिँदासम्मको परिवारको हुटहुटी भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । दुवैको परिवार छोराछोरीका लागि उपयुक्त वरवधूको खोजीमा थिए ।
एउटै अस्पतालका फरक विभागमा कार्यरत डा. विनीता र डा. रोविन पनि आफ्ना लागि उपयुक्त जीवनसाथीको खोजीमा थिए । अस्पतालले जुराएको चिनजान र भेटघाट साथी र आफन्तको सम्बन्धसँग पनि जोडियो । उनीहरूका साथी मात्रै होइनन्, बाबुका साथीहरू पनि साझा थिए । संयोग कस्तो प¥यो भने, साथी र आफन्तबाट विवाहका लागि उनीहरू चुनिँदासम्म दुवैले एकअर्कालाई पनि मनपराइसकेका थिए । विवाहको कुरा घरबाट आउँदासम्म उनीहरूले पनि त्यसतर्फ सोच बनाइसकेको अवस्था थियो । दुवैले डाक्टरी पढाइ सिध्याइसकेका थिए । सामाजिक रूपमा सम्बन्ध जोडियो ।